PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - ESKHALENI:
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Ezemidlalo - ZAKHELE MCHUNU
KANGIKHOLWA ukuthi ukhona umholi wezemidlalo kunoma yimuphi umkhakha osijabulelayo lesi sijabane esaxovwa kunobhutshuzwayo wasethekwini nguDanny Jordaan ongumengameli wesouth African Football Association (Safa).
Ingxabano phakathi kukajordaan no-alpha Mchunu - ababephambili futhi bengamathe nolimu kusungulwa ifootball Transformation Forum (FTF) engene emandleni okuhola isafa kusuka ngowezi-2009 - yiyona kanye eholele ekutheni unobhutshuzwayo wasethekwini ugcine usufana nomuntu olele egunjini lokubonwa ngokusa kubona.
Namuhla itheku linobuholi obubili okungobukamchunu obuzinze ehoy Park nobukamazwi Mkhize obunamahhovisi ecurries Fountain.
Obukamchunu busahamba ngezimoto zesafa ezaphuma ehhovisi elilawulwa ngudkt Jordaan okuyilona futhi eligcobe ubuholi bukamkhize.
Lesi sijingi yisona kanye esenza namuhla isigaba sesafa Kwazulu-natal ABC Motsepe League sibe namakilabhu awugweje njengoba eli-15 esikhundleni sali-16.
Kunabadlali abancisheke ithuba lokudlala kulesi sigaba ngenxa yombango wokuphatha isafa ethekwini namanje osalokhu uqhubekile.
Izinkinga zetheku zehlula ujordaan obhekene nezinsolo ezimbi zokudlwengula owesifazane nokunyathela amacala okunukubeza kwisafa.
Inhloso yale ngosi yanamuhla kakukhona ukugxila kule ntimboti yasethekwini, kodwa wukukhuluma ngobungozi engibubuka bukhokhobela i-athletics South Africa (ASA) eholwa ngu-aleck Skhosana ofike nemilingo kule nhlangano njengoba seyikwazi ukukhiqiza izingqwele zomhlaba futhi ingasahaqiwe yizikweletu njengaphambilini.
Uskhosana usanda kuchonywa uphaphe lwegwalagwala yi-international Association of Athletics Federations (IAAF) ngokuletha uzinzo kwi-asa.
Nokho imibiko yakamuva esiphumele emphakathini ngengxabano ekhona phakathi kwe-asa nekwazulu-natal Athletics (KZNA) eholwa ngusello Mokoena iholele ekutheni ngizijube ngithathe usiba lwami ngiphalaze okumbalwa kulokho okungihlupha esifubeni ngalolu daba.
Le ngxabano ngiyibuka ingase iholele esimweni esifanayo nesisibona kunobhutshuzwayo lapho izimpi zabaholi zibulala khona ikusasa lentsha eyakhele itheku kulo mdlalo.
Kuvela ukuthi sekunabafuna ukuqembuka KWIKZNA bajoyine kwi-asa sebewumgungundlovu Athletics.
Kuthiwa baholwa ngumacdonald “Mac” Chitja.
I-ASA iyavuma ukuthi umthetho uyawavumela amakilabhu ukufaka isicelo sokuba yilunga lale nhlangano kodwa (le nhlangano) igcizelela ukuthi iyaye ikhuthaze ukuba lolu daba ludingidwe wubuholi besifundazwe esisuke sithinteka ukuzitholela isixazululo.
Nakulokhu kuthiwa umgungundlovu usuyibhalele IKZNA incwadi ucela umhlangano wokubhunga lolu daba.
Ngakolunye uhlangothi, IKZNA ibukeka ikholwa wukuthi I-ASA iyithathisa okwevezandlebe kulo mshado yingakho sekuvumbuka umgungundlovu Athletics osuzophenduka uthunjana.
Esitatimendeni SE-ASA sangeledlule kunengxenyana ehumusheka ngokuthi IKZNA kumele icacise ukuthi isafuna yini ukuba yingxenye yalo mdlalo kuleli.
Kuso lesi sitatimende I-ASA iveza nokuthi kuzosungulwa itask Team ezophenya ukuziphatha budlabha kwezikhulu ZEKZNA.
Lapha kangiqondile ukuvikela IKZNA emacaleni ewenzile njengokusolwa kwayo YI-ASA, kodwa ukuqondana kwezinto kushayisa ngamakhala njengoba kuqalwa uphenyo ekubeni sekunomgungundlovu Athletics osufuna ukuzimela.
Nakuba ngingazimisele namuhla ukungena ngijule ekungabonini ngaso linye phakathi kukaskhosana nomokoena (nokho abangakaze baphumele obala ngakho), kodwa ngiyafisa ukuba kungenzeki esesafa ethekwini kwezokugijima ukuze kuzozuza izingane ezigijimayo, ezingahlangene nepolitiki yabaholi.
Phela okubi wukuthi njalo lapho kusuke kutholene khona phezulu izinkunzi ezimbili, wutshani obusala buqothuke baphela.